최종편집 : 2021-09-28 20:20 (화)
PARK CHANYEOL Arena Korea pictorial is released
Group 100% is disbanded
CJ ENM & HYBE Girl Group Audition "I-LAND2" begins
T-ara Eunjung exclusive contract with Management KOO
N.Flying comeback with "TURBULENCE" on October 6th
WOODZ tracklist of 3rd mini-album "ONLY LOVERS LEFT" is released
우즈(WOODZ,조승연), 미니 3집 'ONLY LOVERS LEFT' 트랙리스트 공개
Super Junior D&E comeback in October
Kim Go-eun is considering appearing on "Little Women"
원빈, 올젠 가을 화보 공개
'Living is Challenge' အဖွဲ့၏ ပူးပေါင်းဗီဒီယိုသည် ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူများဖြစ်သော Lilboyနှင့် Miran တို့မှ ဖန်တီးထားသည့် creator ‘LLL’ နှင့်အတူ တွဲလုပ်ခဲ့သည့် SNS (YouTube, Instagram နှင့် Facebook) မှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ Show Me the Money9တွင် ပြသခဲ့သော ဂီတပညာရှင်နှစ်ဦး၏ စိတ်လှုပ်ရှား
K-POP | Khaing 기자 | 2021-02-17 16:09
SNSD ၏ Sunny bnt ဓာတ်ပုံများ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံတိုင်းသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ hotဖြစ်သောဘဝကို ပြသသော ပုံကို ပြပြီး နေ့စဉ်ဘဝ ပုံစံကိုလည်း ပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီး အေးသောအသံဖြင့် ပြသခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲများပြားသော ပုံစံမျိုးစုံကိုပင် Sunny သည် အမြဲ တည်ငြိမ်ခဲ့သည်။၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Girls' Generation၏ 'Into The New World'နှင့်အတူ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်
K-POP | MoMo 기자 | 2021-02-17 16:07
Kim Woo-seok ၏ comeback showcase လုပ်ခဲ့သည်
ဤအယ်လ်ဘမ် '2ND DESIRE'TASTY' သည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော 'အရသာ' နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြသည့် အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ '1ST DESIRE 'GREED' အပြီး ဒုတိယအကြိမ် 'DESIRE' စီးရီးအနေဖြင့် GREEDကို ခေါင်းစဥ်ပုံစံအဖြစ်ထားပြီး အရမ်းကို ခန့်ညားသော ဆွဲဆောင်မှုကို ပြသခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ရဲ့ ပုံစံနှင့် ဆန့်ကျင်ဘ
K-POP | Nang 기자 | 2021-02-17 16:01
Idol web drama 'Fling at Convenience Store' ၏ နောက်ဆုံးပိုင်းကို မဲပေးခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။
Dingo Music၏ ပထမဆုံး idol web drama'Fling at Convenience Store'တွင် လူကြိုက်များသော boy group အဖွဲ့၀င်များ ပါဝင်ပြီး မင်းသမီးနှင့် ချစ်ကြိုက်သည့် ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပိုင်းကို မဲပေးခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်တစ် ဦး နှင့်လက်မထပ်သည်။ ‘Wish Fulfillment Interactive Web Drama' အဖြစ်
K-POP | Nang 기자 | 2021-02-04 19:44
EXO Xiumin သည် စစ်မှုထမ်းပြီးနောက် ပထမဆုံး သီချင်း 'Mr. Queen' OST တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်
(၂၉) ရက်နေ့တွင် 'Mr. Queen' OST ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Big Ocean ENM က "Xiumin ပါ၀င်သီဆိုထားသည့်သတ္တမမြောက် 'Mr. Queen' OST ကို ၃၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်။Xiumin (အမည်ရင်း Kim Minseok) သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၇ ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်ထဲ ဝင်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် EXO အသင်း၀င်အဖြစ် ပထမဆုံး ၀င်ရောက်ခ
K-POP | Nang 기자 | 2021-02-02 18:15
၂၀၂၀ တွင် စုစုပေါင်းအယ်လ်ဘမ် ရောင်းချနှုန်း ၁.၂၉ သန်း ရှိသည့် IZ*ONE! အမျိုးသမီး အနုပညာရှင် TPO1!
ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အများဆုံး အယ်လ်ဘမ် ရောင်းချနှုန်း Hanteo Chart မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ပတ်လည်အယ်လ်ဘမ် ရောင်းအား ကိန်းဂဏန်းများအရ IZ*ONE သည် ၂၀၂၀ နှစ်ပတ်လည်အယ်လ်ဘမ် ဇယားတွင် အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်များထဲမှ ပါဝင်သည် (ရေတွက်သည့်ကာလ - ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက်) စုစုပေါင်းရောင်း
K-POP | MoMo 기자 | 2021-02-02 18:13
2PM ပြန်လာပြီ! Jang Woo-young x Hwang Chan-sung သည် 'I Live Alone' တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
'I Live Alone' တွင် Jang Woo-young နှင့်နှစ်အတန်ကြာမှ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့သော 2PM ၏ အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင် Hwang Chan-sungနှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ် ထမင်းပွဲစားပြီး အချိန်ကုန်ဆုံးသည်။သူတို့နှစ်ဦးသည် ထမင်းအတူစားပြီး အရင်တုန်းက အဆောင်မှာ နေတုန်းက အမှတ်တရများကို ပြန်ပြောရင် သာယာသောအချိန်ကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆယ်နှစ
K-POP | Khaing 기자 | 2021-01-29 21:36
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် BLACKPINK ၏ပထမဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု
၂၇ ရက်နေ့တွင် YG Entertainment မှအေဂျင်စီ၏အဆိုအရ Black Pink သည် ၂၈ ရက်တွင်ထုတ်လွှင့်မည့် US CBS's The Late Late Show နှင့် James Corden 'တွင်ပေါ်လာမည်။Black Pink သည်'James Corden Show 'ဖျော်ဖြေရေး၏ဖျော်ဖြေမှုနေရာတွင်ပြီးဆုံးပြီးဖြစ်သည်။ ကုလားကာဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော 'SHOW' သည်ဂျိမ်းစ်ကော့ဒ်န်ပြ (Show C
K-POP | Nang 기자 | 2021-01-29 21:34
IU comeback! 'Celebrity' ဖြင့် music chart အားလုံးတွင် ပထမနေရာ ရခဲ့သည်
IU သည် အွန်လိုင်းmusic siteအမျိုးမျိုးမှ ၂၇ ရက်နေ့ ညနေ (၆ : ၀၀) နာရီတွင် သီချင်းသစ် Celebrityကို ကြေငြာခဲ့သည်။'Celebrity' သည် IU ပြင်ဆင်နေသည့် album အသစ်မှ သီချင်းဖြစ်သည်။ IU သည် လွန်ခဲ့သာ (၉) ရက်နေ့က “35th Golden Disk Awards” တွင် digital music sector award အား ရရှိသည့်အချိန်တွင် သီချင်းသစ်အကြောင်း
K-POP | Nang 기자 | 2021-01-29 21:31
Kim Jaejoong ၏ ၃၆ နှစ် အွန်လိုင်းမွေးနေ့ကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့သည်
Kim Jaejoong ၏ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တွင် ၂၆ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီတွင် Naver V Live Membership member များအတွက် ကျင်းပသော “Kim Jaejoong With J-Party X Vanilla Stage” မှ တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းရှိ ပရိသတ်များနှင့် အချိန်နှင့် တပြေးညီဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသော မွေးနေ့ဖြစ်
K-POP | Nang 기자 | 2021-01-28 21:42
Chungha၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 15 ရက်နေ့တွင် ပုံမှန်အယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူ comeback teaser ဖြန့်ချိခဲ့သည်
25ရက်နေ့တွင် တရားဝင် SNS မှ ဖေဖော်ဝါရီလ 15 ရက်နေ့တွင် ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသည့် ပထမဦးဆုံးအယ်လ်ဘမ် အပြည့်အဝဖြစ်သော 'Querencia' ၏ အချိန်ဇယားကို တင်ခဲ့သည်။ ရုပ်ပုံအရ ဓာတ်ပုံ teaser နှင့် concept clip လေးခုကို ၂၆ မှ ၂၉ ရက်အထိဖြန့်ချိမည်။ ထို့နောက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်မှ ၅ ရက်အထိ၊ Side A 'NOBLE'၊ Side B 'SAVAG
K-POP | MoMo 기자 | 2021-01-28 21:41
Akdong Musician (AKMU) သည် YG နှင့် စာချုပ်ကို ငါးနှစ် သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်
Akdong Musician သည် အဆိုတော် တေးရေးဆရာ နှစ်‌ယောက်အဖွဲ့အဖြစ် YG Entertainment မှ မောင်နှမများဖြစ်သော Lee Chan-hyuk နှင့် Lee Soo-hyun တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် သူတို့သည် SBS တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသသည့် K-Pop Star2အစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ခဲ့ပြီး အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်သီချင်းများဖြစ
K-POP | Nang 기자 | 2021-01-27 20:13
EXO D.O. ယနေ့(၂၅ ရက်) တပ်သို့ပြန်လာခြင်းမရှိဘဲ စစ်မှုထမ်းခြင်းကို တာဝန်ကျေပွန်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့သည်
2019 ဇူလိုင်လတွင် စစ်တပ်ထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် D.O. သည် Xiumin ပြီးနောက် EXO အဖွဲ့၏ စစ်မှုထမ်းဆောင်ပြီး ဒုတိယအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။D.O. နှင့် သရုပ်ဆောင် Seol Gyeong-gu တို့သည် ဒါရိုက်တာ Kim Yong-hwa ၏ တွင် အာကာသကို နောက်ခံထားသော သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားတွင် သရုပ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သ
K-POP | Nang 기자 | 2021-01-27 16:23
EPIK HIGH နယူးယောက် Times Square Main Display Board တွင် ပါခဲ့သည်
EPIK HIGH သည် (၁၈) ရက်နေ့ ညနေ (၆) နာရီတွင် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ဂီတဆိုဒ်များမှတစ်ဆင့် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော 'Epik High Is Here'၏ ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်(Epik High Is Here 上)'ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ခေါင်းစဉ်သီချင်း "ROSARIO (Rosario) (Feat CL၊ Zico)" သည် အခြားသူများ၏ ကံမကောင်းမှုနှင့် ကျရှုံးမှုကို ဖြစ်စေ
K-POP | MoMo 기자 | 2021-01-27 16:21
Hyuna ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် W.တွင် ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်
Hyunaသည် W. Korea တွင် Diablo chic ပုံစံဖြင့် ပိုစ့်အမျိုးမျိုးကို ပြသခဲ့သောကြောင့် လူအများစိတ်ဝင်စားနေကြသည်။အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ Hyuna သည် သူမ၏ ၇ ကြိမ်မြောက်အယ်လ်ဘမ် ‘I’m Not Cool’ ကို ၂၈ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီတွင် ဖြန့်ချိပြီး တစ်နေ့တည်းတွင် Mnet ဂီတအစီအစဉ်ဖြစ်သော M Countdown တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဖြန့်
K-POP | Nang 기자 | 2021-01-27 16:19
iKON BOBBY သည် ၃ နှစ်အကြာမှ တစ်ကိုယ်တော် comebackလုပ်ခဲ့သည်။
YG Entertainment သည် ၁၈ ရက်နေ့တွင် တရားဝင်ဘလော့တွင် BOBBY ၏အယ်လ်ဘမ် ဖြန့်ချိရန် ပိုစတာတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၅ ရက်နေ့တွင် အယ်လ်ဘမ်အသစ်ကို ထုတ်ဝေမည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ပိုစတာတွင် BOBBY သည် စတိုင်ကျသော ပုံစံပြသခဲ့ဖြစ်သည်။ သူသည် ဤအယ်လ်ဘမ်၏ conceptနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိလိုစိတ်ကို နှိုးဆွခဲ့ပြီး အဆောက်အအုံ၏ ထိ
K-POP | Khaing 기자 | 2021-01-26 21:03
2 Super Junior D&E comeback in October
3 Kim Go-eun is considering appearing on "Little Women"
4 Gong Yoo Marie Claire cover for the October issue is released
5 원빈, 올젠 가을 화보 공개
6 WENDY as the first runner OST for tving "Yumi's Cells"
7 JUNG YONG HWA appears as the main character of "It's You out of nowhere"
8 'Squid Game' heldaProduction Presentation